VPN ဆက်သွယ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများဆိုတာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ ? - MiteLar
VPN ဆက်သွယ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများဆိုတာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ ?
VPN သည် “Virtual Private Network” ကို ရည်ညွှန်းပြီး အများပြည်သူသုံးကွန်ယက်များကို အသုံးပြုသောအခါ ကာကွယ်ထားသော ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကို တည်ဆောက်ရန် အခွင့်အလမ်းကို ဖော်ပြပေးသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ VPN များသည် သင်၏အင်တာနက်အသွားအလာကို encrypt လုပ်ပြီး သင်၏အွန်လိုင်းဝိသေသလက္ခဏာကို ဖုံးကွယ်ထားပေးသည်။ ၎င်းသည် တတိယပါတီများအနေဖြင့် သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ခြေရာခံရန်နှင့်အချက်အလက်ခိုးယူရန် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ စာဝှက်စနစ်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြစ်အောင်လုပ်သည်။
VPN တစ်ခုသည် VPN host မှ ဖွင့်ထားသော အထူးစီစဉ်ထားသည့် အဝေးထိန်းဆာဗာမှတဆင့် ကွန်ယက်ကို လမ်းကြောင်းပြောင်းစေခြင်းအားဖြင့် သင်၏ IP လိပ်စာကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် VPN ဖြင့် အွန်လိုင်းသုံးလျှင် VPN server သည် သင်၏အချက်အလက်များ၏ အရင်းအမြစ် ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
သင်၏အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ (ISP) နှင့် အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များသည် မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကို ကြည့်ရှုခြင်း (သို့မဟုတ်) မည်သည့်ဒေတာများကိုမဆို အွန်လိုင်းမှ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်၊၊ VPN တစ်ခုသည် သင်၏အချက်အလက်အားလုံးကို “gibberish” အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသော filter တစ်ခုနှင့် အလုပ်လုပ်သည်။
VPN ဆက်သွယ်မှုသည် သင်၏အင်တာနက်အသွားအလာကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး ပြင်ပဆက်သွယ်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ စာဝှက်မထားသည့်ဒေတာကို ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု ရှိ၍ ကြည့်လိုသူ မည်သူမဆို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ VPN တစ်ခုနှင့်အတူ ဟက်ကာများနှင့်ဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်သားများသည် ဤအချက်အလက်များကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆို၍ မရပါ။
လုံခြုံသောစာဝှက်စနစ် – ဒေတာများကိုဖတ်ရန်၊ သင်စာဝှက်ရန် သော့တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ brute force attack ဖြစ်ခဲ့ရင် ကွန်ပျူတာကို code တစ်ခုသတ်မှတ်ဖို့ နှစ်ပေါင်းသန်းချီ ကြာလိမ့်မယ်။ VPN ၏ အကူအညီဖြင့် သင်၏ အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကို အများပြည်သူသုံးကွန်ယက်များ၌ပင် ဖုံးကွယ်ထားပေးသည်။
သင်၏တည်နေရာကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်း – VPN ဆာဗာများသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် သင်၏ proxy များအနေဖြင့် အဓိကကျသည်။ လူ ဦး ရေဆိုင်ရာ တည်နေရာအချက်အလက်ကို အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုရှိ ဆာဗာမှလာသဖြင့် သင်၏တည်နေရာကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။
ထို့အပြင် VPN service အများစုသည် သင်၏လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ အချို့သောပံ့ပိုးပေးသူများကမူ သင်၏အပြုအမူကို မှတ်တမ်းတင်သော်လည်း၊ ဤအချက်အလက်များကို တတိယပါတီများသို့ မပို့ပါနှင့်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏အသုံးပြုသူအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်သော ဖြစ်နိုင်ချေမှတ်တမ်းများကို အမြဲတမ်း ဖုံးကွယ်ထားသည်။
ဒေသဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလက်လှမ်းမီမှု – ဒေသဆိုင်ရာဝဘ်ဆိုက်များကို နေရာတိုင်းမှ အမြဲတမ်း မရရှိနိုင်ပါ၊၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည် များသောအားဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှ ၀ င်ရောက်နိုင်သော အကြောင်းအရာများ ပါ ၀ င်သည်။ Standard connection သည် သင်၏တည်နေရာကို ဆုံးဖြတ်ရန် နိုင်ငံတွင်းရှိ local servers များကို အသုံးပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ခရီးသွားနေစဉ် အိမ်တွင်အကြောင်းအရာကို လက်လှမ်းမမီနိုင်သကဲ့သို့၊ VPN တည်နေရာပြယုဂ်များနှင့်အတူ သင်သည် အခြားနိုင်ငံတစ်ခု (သို့ မဟုတ်) ဆာဗာတစ်ခုသို့ပြောင်းပြီး သင်၏တည်နေရာကို“ ပြောင်းလဲ” နိုင်သည်။
လုံခြုံသောအချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်း။ အကယ်၍ သင်အဝေးမှ အလုပ်လုပ်လျှင် သင်၏ကုမ္ပဏီကွန်ယက်တွင် အရေးကြီးသောဖိုင်များကို သင်ရယူရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်၊ ဤအချက်အလက်မျိုးသည် လုံခြုံသော ဆက်သွယ်မှု လိုအပ်သည်။ Network ကို ၀ င်ရောက်ရန် VPN connection လိုအပ်လေ့ ရှိသည်။ VPN ဝန်ဆောင်မှုများသည် ပုဂ္ဂလိကဆာဗာများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး အချက်အလက်ယိုစိမ့်မှု အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန် စာဝှက်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။
VPN ဆက်သွယ်မှုသည်သင်နှင့်အင်တာနက်အကြားလုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်သည်။ VPN မှတစ်ဆင့်သင်၏ data traffic အားလုံးကို encrypted virtual tunnel မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသည်။ သင်၏အင်တာနက်လိပ်စာကိုအင်တာနက်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏တည်နေရာကိုလူတိုင်းမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားသည်။ VPN ဆက်သွယ်မှုသည်ပြင်ပတိုက်ခိုက်မှုများမှလည်းလုံခြုံသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ encrypted tunnel ထဲမှဒေတာကိုသင်သာ ၀ င်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ သော့မရှိသောကြောင့်အခြားဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်လို့ပါ။ VPN တစ်ခုသည်သင့်အားဒေသတွင်းကန့်သတ်ချက်ရှိသောအကြောင်းအရာများကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ streaming များစွာကိုနိုင်ငံတိုင်း၌မရနိုင်ပါ။ VPN ကို သုံး၍ သင်ရယူနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ Kaspersky မှ VPN ဖြေရှင်းချက်များကို Windows PC များနှင့် Apple Mac နှစ်ခုလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
မိုဘိုင်းဒေတာအသွားအလာကိုအမည်မဖော်လိုသောစမတ်ဖုန်းများအတွက် VPN ဆက်သွယ်မှုပံ့ပိုးသူများလည်းယခုတွင်ရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုပေးသူများကို Google Play Store သို့မဟုတ် iOS App Store တွင်ရှာနိုင်သည်။ သို့သော်၊ အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်၏အချက်အလက်အသွားအလာကိုသာ VPN သုံး၍ အမည်ဝှက်ပြီးကာကွယ်ထားသည်ကိုသတိရပါ။ VPN ဆက်သွယ်မှုသည်သင့်အားဟက်ကာတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ Trojan များ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ်အခြား malware များမှကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အပိုယုံကြည်ရသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုမှီခိုသင့်သည်။